Abantu abangavamile kakhulu emhlabeni
Uke wazuza ikhala eligijimayo futhi uzicabange ungumuntu ongejabule? Siphakamisa ukuthi ufunde ngabantu ababhekene nezifo ezimbi ngempela. Ngezansi ungakwazi ukujwayela izifo eziyishumi ezingavamile zezempilo, ngaphandle kwalokho ukusho okunye - abantu abangavamile kakhulu emhlabeni.
Owesifazane othola ama-orgasms angu-200 ngosuku
UBrithani uSarah Carmen, oneminyaka engu-24 ubudala, ubhekene nesifo esingavamile - isifo sokuvuswa kocansi okuqhubekayo, ngenxa yokuthi igazi lakhe ligijimela emkhathini. Yena uqobo ukholelwa ukuthi isizathu sokungahambi okungajwayelekile yizo zokubeletha ezithatha ngesikhathi sakhe. Isifo esiyinqaba sesivele sibangele ukuhlukana kukaSara nomthandi wakhe, futhi-ke, amadoda amasha, angafinyeleli emisebenzini yakhe yobulili.
Indoda engakhuli kahle.
Omunye uMnu. Perry akalokothi adle, nakuba engagcini umsoco. Ngenxa yalokho okuthiwa. i-lipodystrophy, isifo esingavamile, ngenxa yokuthi umzimba ushisa amafutha ngokushesha, awukwazi ukuzuza isisindo. Ngesinye isikhathi wayengumfana ogcwele, kodwa lapho ehamba iminyaka engu-12, amafutha ayanyamalala ngesikhathi esifushane kakhulu. Wazama ukubuyisela isisindo ngokushintsha ukudla okuphezulu kwekhalori, kepha akazange aphumelele kulolu hlelo. Umzimba kaMnu. Perry ukhiqiza inani le-insulin izikhathi eziyisithupha eziphakeme kunejwayelekile.
Yiziphi ezinye abantu abangavamile kakhulu emhlabeni?
Umuntu ongazizwa ebandayo
UWim Hof ​​waseHolland, obizwa ngeNtaba yeMountaineer, waziwa ngokukhuphuka kwentaba yaseMont Blanc emifushane, eneqhwa elibi phezulu. Wabeka amarekhodi ezinjalo ezinjalo futhi ezama njalo ukukhulisa inombolo yabo. Kwabesosayensi, ukulahlwa kwakhe kuyimfihlakalo: abakwazi ukuchaza ukuthi u-Dutchman oneminyaka engu-48 ubudala usezingeni eliphansi ngokushisa komuntu okulula.
Umfana ongakaze alale
Umfana ogama lakhe linguRet uhlushwa ngokungahambi okungajwayelekile: akalokothi alale. Kwase kuyiminyaka eminingi kumangala abazali bakhe kanye nodokotela abaphethe, kwaze kwacaca ukuthi kungani lokhu kwenzeka. Isizathu sokuvuka kwakhe kwamahora angu-24 yilokho okuthiwa. I-Arnold-Chiari syndrome, lapho ingxenye ye-cerebellum iba khona ekuvulekeni okukhulu kwe-occipital.
Intombazane enesifo sokungena emanzini
U-Tinker Ashley Morris akanalo ngisho nethuba lokugebha echibini noma ahlambe, ngoba unamahloni emanzini. Elinye igama lesi sifo sesikhumba esingavamile kakhulu (kukhona amacala ambalwa kuphela emhlabeni jikelele) - "U-Aquagenic Urticaria"
Owesifazane ongakhohlwa lutho
Owesifazane oneminyaka engamashumi amane, ogama lakhe lifihliwe ngokucophelela ukuze livikele impilo yakhe yangasese, inememori engabambeli. Uyakwazi ukukhumbula noma yiluphi usuku kusukela eminyakeni engu-25 eyedlule ahlala nayo yonke imininingwane nemininingwane. Ngaphezu kwalokho, ngendlela efanayo ukhumbula zonke izenzakalo zenhlalo nezombusazwe nezinye izenzakalo ezivelele ezazizwa noma ezaziyo ngendlela ehlukile. Ngokuba ukuvikelwa okukhulunywe ngaye kakade kusukela ekuhlakanipheni, okulangazelela ukuhlola amakhono akhe angavamile, wanikwa igama lekhodi AJ. Ukuphambuka kwayo kuyingqayizivele kangangokuthi okhethekile kuye kwafakwa esayini yezokwelapha igama elichazayo elichaza leli cala: i-hyperthymestic syndrome.
Intombazane engadla kuphela amaphilisi amancane "Tshwabela"
U-Natalie Cooper oneminyaka engu-17 ubudala ngezizathu ezingalindelekile akakwazi ukuthatha noma yikuphi ukuphawula "Thibela ukuthatha". Noma yikuphi ukudla okunomthelela omubi kakhulu enhlalakahleni yakhe. Odokotela abakwazanga ukuthola ukuthi yini eyabangela ukuphambuka okungavamile. Amakhemikhali adingekayo ekusebenzeni okujwayelekile komzimba uNatalie athola ngokugcwele. Yebo, ungomunye wabantu abangavamile kakhulu emhlabeni.
Umculi ogcina njalo
UChris Sands - umculi oneminyaka engu-24 ubudala - uhamba nge-periodicity kwemizuzwana emibili ngisho nangesikhathi sokulala. Ngokusho odokotela, isizathu salokhu kungumonakalo we-valve phakathi kwesifo nesisu. UChris udlala eqenjini elidakayo futhi uthi ukugula kwakhe okungavamile kuphazamisa kakhulu umsebenzi wakhe, ngoba angathanda ukucula.
Intombazane ewela ekuhlekeni
UKay Underwood oneminyaka engu-20 ubudala uhlushwa yi-cataplexy. Lesi sifo sibonakala ukuthi cishe noma yiluphi uhlobo lwemimoya enamandla ngokwanele kuholela ekubuthakathakeni okubukhali kwemisipha. Njengoba ejabulile, ukwesaba, ukumangala noma ukuhleka, ngokushesha uwela emhlabathini. Ukwengeza, ngaphezu kwe-cataplexy, uhlushwa yi-narcolepsy, okungukuthi, angakwazi ukulala ngokungazelelwe ngaphandle kokuguquka nganoma yisiphi isikhathi.
Owesifazane ophethwe yi-allergies kuze kube yimishini yesimanje
Ukubhebhetheka komzimba kumafoni omakhalekhukhwini kanye nama-microwave ukuthi u-Debbie Bird, umphathi oneminyaka engu-39 ubudala, akazizwa nsuku zonke ngokwakhe. Ukwandisa ukuzwela emasimini kagesi, okukhiqizwa ama-oven microwave, amakhomphyutha kanye namafoni. Ngenxa yempembelelo yabo, ihlanganiswa nokuphuza okubuhlungu, futhi izinkophelo zayo zivuvuka kakhulu. Ngakho-ke, indlu yakhe ikhululekile ngokuphelele kule nqubo.
Yiyo indlela abantu abahluke ngayo abavela ezingxenyeni ezahlukene zomhlaba. Izifo zabo ezihlukahlukene, eziyinqaba zenza kube lula ukubabiza ngokuthi abantu abangavamile kakhulu emhlabeni. Kodwa ingabe kuhle kangaka? Akukuhle yini ukuba ngowokujwayelekile, kodwa umuntu ophilile?
U-Olga Buzova noDmitry Taras bahlukana? Kubonakala sengathi yebo ...
U-Anna Sedokova no-Pig Pig babelane ngokuthandwa
U-Olga Buzova wabuthana ekhonsathini yakhe eSt. Petersburg Palace Square, ividiyo
I-IVF noma umama wokubeletha? Ividiyo ye-Anna Kournikova okhulelwe enyangeni engu-5 iphakamisa imibuzo
U-Christina Orbakaite wakhuluma ngezici ezikhethekile zokukhuliswa kwezingane zakhe
U-Ksenia Sobchak utshele ukuthi umyeni wakhe uyamhlupha
Ukugqoka okumhlophe - ukushaya ngo-2014
Ukwesaba kwezingane, umsuka wabo nendlela yokuzivimbela
Ubuningi be-Cheese Emmental
Inkabi igubha iwayini
Inhloko yomndeni enezinhlamvu ezinkulu
Ungayithola kanjani umbala wakho wezinwele?
I-Lenten manicure ye-chocolate
Ama-anyanisi aluhlaza: izakhiwo eziwusizo
Ukuhalalisela u-Alexander Gradsky kuvutha abalandeli be "Voice", ividiyo
Izizathu eziyinhloko zokuxabana kwemibhangqwana eshadile
Amadoda angaphumelelanga uSvetlana Permyakova, noma Yini eholela esifisweni esinamandla sokuba nomndeni
I-Hirudotherapy - ukwelashwa kwezifo ngama-leeches
Unyaka ka-2018 uzoba yini ngezinja zeCanscer
Abadlali abathandwa kakhulu be-cinema yezwe, ngo-2011
I-lavash ne-suluguni ne-cilantro